Wiil Kenya u dhashay oo ku guulaystay orodkii maaradoonka ee Tokyo
Febraayo 26, 2012
Michael Kipkorir Kipyego oo u dhashay dalka Kenya ayaa ku guulaystay orodkii maaradoonka ee Axadii (February 26-keedii) ka dhacay Tokyo, kaasi oo soo af-jaraaya rikoorkii uu horre u haystay orod-yahankii u dhashay dalka Ethiopia ee Haile Gebrselassie. Qodobbo la xiriira
Ezekiel Kemboi oo ku guulaystay billad-dahabkii ugu horreeysay ee ay Kenya ka hesho London
Madaxa Olambiga Kenya oo beeniyay in ciyaartooydu qaataan dawooyin
Kenya oo rikoor cusub oo caalami ah u dhigtay orodka ragga ee 800 ee mitir
"Aad baan ugu faraxsanahay inaan isku-daygaygii ugu horreeyay ku guulaysto orodka maaradoonka ah ee ka dhacay Tokyo," ayay Kipyego oo sidaasi leh ka soo xigatay AFP. Kipyego wuxuu isla markiiba ku dhaafay Gebrselassie markii la gaaray calaamada 38-kiiloomitir, isagoo ku guulaystay wakhti dhan 2 saacadood, 7 daqiiqo iyo 37 il-biriqsi. Gebrselassie wuxuu galay kaalinta afraad isagoo ka dambeeyay Arata Fujiwara oo u dhashay dalka Japan iyo Stephen Kiprotich oo ka soo jeeday dalka Uganda. Helena Loshanyang Kirop oo u dhalatay Kenya waxay kaalinta saddexaad ka gashay tartankii haweenka iyadoo ka dambeysay Atsede Habtamu iyo Yeshi Esayias oo labbadoodu u dhashay dalka Ethiopia.